•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Supervision of Procurement department •	Provide reports to management on regular basis on the activities managed and cost cutting initiatives. •	Procurement of department wise requirement material/equipment and other supplies •	Preparation of purchase proposals, Purchase requests and purchase orders for procurement purpose. •	Maximize the best value for money for Country wide procurement activities and in line with the Company policies and procedures. •	Establish the SLAs for all service providers and suppliers and monitor it ...
•	Stock အ၀င်အထွက်စာရင်းကို အသေးစိတ်စိစစ်၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	Store ကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပြီး ကုန်ပစ္စည်းများအား အသွင်းအထုတ်လွယ်ကူလျှင်မြန်စေရမည်။ •	အခြား Department မှ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး� ...